Site Dhisida waa shaqo adag, laha ma mahaha inay noqoto mid qaali ah. Uma vez que você está gastando dinheiro com o dólar ah, você está pagando koodhka caadiga ah, ka dibna ou bixiyaan kumanaan dheeraad ah sannad kasta, e você está fazendo goobtaas ilaaliyaan. Waa hagaag, hadda maahan.
2 O Rosto: WordPress-Website-Builders
2.4 4 – Plugins para você
3 Você buscou: WordPress no site Dhismaha?
Haddii aad rabto in aad website-ka ku rarayso raqiis, waxaad haysataa laba ikhtiyaar oo ballaaran – dhis mid ah WordPress, ama dhis mid ka mid ah mid ka mid ah jilayaasha badan oo jilayaasha badan ee jilayaasha ah ei DIY ah ee Wix).
Labada ikhtiyaar waxay bixiyaan qaab awood leh oo dabacsan oo lagu dhisayo boggaaga, você tem sido kale habka lagu maamulayo loona daabacayo content online.
WordPress tem tudo a ver com outras canções rakibi karaa server kasa ou PHP no MySQL, e ka dhawaad ​​dhammaan server-yada o heli karo maalmahan. Dhismayaasha Website-yada waxay badanaa kaa qaadi doonaan lacag bille ah ilaa intaad rabto inaad isticmaasho.
Você sabe o que é isso? Midkee kan ka wanaagsan? Waxaan isku dayi doonaa inaan ku siino jawaab qeexan.
Você pode usar o blog ou o site cusub? Muuqaal sawir ah ee FastWebHost
O Rosto: WordPress-Website-Builders
WordPress waa mid awood leh, laakiin waxa uu leeyahay curva waxbarasho. Dhismayaasha Websiteka e bay bay yaryihiin, laakiin e ayey u fududahay no isticmaalo. Ganacsiga ganacsiga wuxuu u eg yahay sidan oo kale:
Wanaagsan site-yadlayaal ayaa leh bogag warbaahineed oo muuqda kuwaas oo kuu oggolaanaya em aad soo jiidato waxyaabo ku dhexjira websaydhkaaga. WordPress tem toda a interface ah. Halkii, waxay leedahay WYSIWYG (waxa e aragto waa waxa e hesho) tifaftiraha.
Tifatirayaasha jiidista yo joojinta maneira fududahay em la shaqeeyaan maxaa yeelay waxaad arki kartaa waxta dhacaya waqtiga dhabta ah. Tifaftiraha WYSIWYG maneira ka adag tahay sababtoo ah waa inaad hubisid waxa shey kasta ee koodhka ah ee aad ku qorto u egtahay badhanka hore.
Você pode usar o seu estilo como um WordPress no WordPress. Qalabyada qaarkood ee software waxay ku dari karaan shaqadeeda, lakain wax oraanay inaysan jirin meel macquul ah ama si sahlan loo isticmaalo sida jiidiyaha yyo dhererka la imow dhismayaasha website-ka DIY.
Dhismaha Websaydhada Bilaashka ah ee FastWebHost – onde a sociedade xirmo kasta oo marti-gelin ah.
WordPress wuxuu awood u yeelan karaa wax kasta – ka soo galow shakhsi ahaaneed oo ah shabakad jaamacadeed oo buuxa, e dukaanka online ah. Natiijo ahaan, waxay mararka qaarkood dareemi kartaa jahwareer iyo abstract- maxaa yeelay waxaa loogu talagalay inay awoodaan inay sameeyaan wax badan oo dhan.
Dhistayaasha website-yada ah guud ahaan maneira ka yaryihiin dabacsanaan. Waxaa loogu talagalay inay awood u yeeshaan bogagga internetka sida ganacsiga yaryar yyo makhaayadaha. Badankood waxay ka doaan sheybaarada cusub maasta kasta, laiain waligood ma ahan kuwo dabacsan sida sameynta WordPress.
Iyada o dhisayo jiido yyo dhicin, waxaad wax ka qabaneysaa qaab dhismeedka. Waxaad awood u yeelan kartaa wax kasta oo ku jira qaabkan, laakiin qaabka aasaasiga ah iyo socodka websaydhku waxay u egtahay inay isku mid yihiin. Website-yada dhismayaasha waxay ku faanaan em todos os lugares qaababka "ugu fiican" kuwaas oo raacaya caadooyinka sharafta leh. Uma vez que você foi bem-vindo ao site-kaagu yahay mid la socda, ele também foi kale ma noqon kartid abaalmarin loogu talagalay naqshadda goobta.
Eeg Designer Gleb ou Duplos você pode criar uma cera ou usar uma jeedno.
WordPress, dhinaca kale, waa jajab e jilicsan – faça você mesmo.
4 – Plugins para você
Meados de meados e meio do WordPress, estamos bem. Aprenda a usar o plugin do WordPress para WordPress. Kuwani waxay kordhinayaan shaqeynta boggaaga. Haddii e fikrad u haysato wax, waxaad u badan tahay inaad heshid plugin ah oo kuu ogolaanaya inaad sameyso. Laakiin sababtoo ah fiilooyinka kuwan waxaa loogu talagalay dad kala duwan oo ay u qaban karaan si aan sax ahayn. Faa’iido ayaa laga yaabaa inay kuugu baahantahay em aad ku qorto koodka mawduucaaga, ama ou diyaari khidad kale e aad u shaqeyso.
Dhisidda Website é um site com WordPress e WordPress. Laakiin, sabah ah kulligood oo dhan ayaa lagu dhisay guryo, badankoodu waxay ku shaqeyn doonaan ganaax la’aan adigoon ku dhicin. Dhibatadu waa, dabcan, ma heli doontid waxtaro wax kasta. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inaad sameyso adigoon lahayn.
Faa’iidada kale ee weyn ee é WordPress, precisa de fure (plugins) ah ah. Badankood badankood waa bilaash. Ina aad u baahan tahay em bixiso si aad u hesho farsamooyin awood leh ama waxyaabo gaar ah, khidadaha lacag la’aanta ah guud ahaan waa ku filan qof walba. Qaar badan oo ka mid ah makiinadaha website-yada wax u dhiska waxay kuxiran yihiin ama ku xiran yihiin.
O WordPress não é o mais popular da internet, é o mais valioso do mundo. Taasi waa sababta shaqaaleysiiye wuxuu noqon karaa meados de qaali ah (inkastoo uu ka yaryahay inaad ka fikirto). Shabakad khaas ah oo wanaagsan ayaa laga yaabaa inay ku kacdo $ 800 + (xagga hoose). Joogitaanka goobta ayaa wali u baahan kartaa horumariye xor ah oo kaa caawiya, kaas oo bixiya khidmado dheeraad ah. Dabadeedna cera jira qiimaha domínio iibsashada (preço médio US $ 1,50 e US $ 14 dólares) por um preço (US $ 12 / preço +) Você pode comprar outros produtos como US $ 20 / bishii. Adiga ayaa é-furan kara oo bedeli kara nuqul, fazer upload de imagens, ama ku dari bogag cusub gudahood. Weli waxaad u baahan tahay em bixiso kharashka domainka, laakiin martigelinta waxaa ku jira.
Iyada oo horumariye, inkasta, kharashaadkaagu waxay noqonayaan kuwo sare. Site-ka dhisuhu wuxuu isku dayi karaa inuu kugu saxo qiimo hooseeya ama xitaa "livre"Bogga. Lakain marka aad rabto inaad bilowdo, waxaad u baahan doontaa inaad bixiso. Taasi waa sababta é aad muhiim u tahay no mundo qiimaha ka hor inta aanad sameeynin website iyaga oo leh iyaga.
Bixiyahaaga US $ 4,99 / mês
Site desenvolvido por dhistararuhu wuxuu la yimaadaa martigelintiisa. Qalabaynta lagama rabo. Kaliya iibso domínio magac ah oo ku xir site-dhise-samee, oo waad fiicantahay inaad tagto.
WordPress para você. Você também pode usar o WordPress para criar uma lista de sites martida na web e criar seu próprio WordPress em MySQL e PHP. Waxaad foio kale u baahan kartaa inaad sida loo isticmaalo farsamada ft ama aad u hesho hab habale kale oo aad u gudbin karto faylasha WordPress e muito mais.
Faa’iidada ugu weyn ee loogu talagalay WordPress encerra mar walba u wareejin kartaa martigaliye kale oo bixiya heshiis wanaagsan ama adeeg fiican (ama labadaba). Iyadoo dhisaha bogga, waxaad ku jirtaa martigelintooda weligeed.
Inta badan martigeliyeyaasha wanaagsan waxay sido kale kuugu soo diri doonan email gaar ah domain, laakiin badankooda website-yada sameeyaan ma sameyn karaan.
Inta badan dhismayaasha websaydhku waxay yeelan doonaan waxoogaa xaddidan, sida xaddiga ugu badan ee gaadiidka (xawaaraha xawaaraha), xitaa iyada ou xulashadooda ugu qaalisan. Qaarkood waxay xitaa xitaa muujin karaan xayeysiiskooda boggaaga oo leh qorshe qiime jaban.
Iyada o WordPress, e xaddidan tahay xawaaraha é martida e porta. Waxaa laga yaabaa inaad ku dhufatid xadka qaarkood, laakiin marwalba waxaa jira isbeddel qaar ka mid ah oo aad qaadan kartid si aad ugu noqoto waxqabadka buuxa.
Dhismayaasha dhismaha ee DIY waa kuwo cusub. Waxay oferece inay noqdaan kuwo caan ah sannadihii la soo dhaafay, gaar ahaan koritaanka Mashruuca – oo ah dhisme DIY aag gaar ah oo loogu talagalay shirkadaha yaryar ee e-commerce.
WordPress oo dhinaca kale ah ayaa ku wareegsanaa sannadihii 14. Waxaa loo isticmaalaa in ka badan 27,5% e outros sites na internet e 10 e mais na sarreeya, ou seja, 60% mais do que internet e e jira.
Mawduucyada xayawaanka maxaa yeelay waxay saameeysaa sida é u fududahay isticmaalka. Haddii aad ku dhibto WordPress, encerrar e salvar ou adicionar kartaa Google e outros anúncios. Iyada oo dhisaha dhismaha, rajadaada ugu weyni waa shirkadu waxay leedahay hage habboon ama caawimo bogag.
Você buscou: WordPress no site Dhismaha?
Waxaan u ballanqaadnay inaan ku siin doono jawaab qeexan, anagana waanu. Encontrar marka hore wax isan daynaa kaliya marka é macno u leedahay em la isticmaalo.
Waxay sugi karaan ugu yaraan maalmo yar si é u noolaadaan
Baahan é a mesma coisa que shabakad aad u ballaaran, oo aad u ballaaran
Wakhti yyo / ama lacya ya joogi doonaa si e u hesho cera e u macquul ah
U baahan tahay shaqeynta site dhistar ma bixin karo
Waxaan nahay taageere weyn oo WordPress ah dhab ahaantii. Haddii aad doonayso também na cera do mesmo modo, waa naad saxdaa oo aad rumaysantahay waqtiga maalgelinta WP waa u qalantaa.
Waxaa laga yaabaa inaad ka walwalsan tahay kharashka. Ha joogin. Sabah ah xajmiga bulshada WordPress é caankiisaba, horumariyayaashu maneira ka qaalisan yihiin hadda ka hor inaanay weligoodba joogin. Waxaad ka heli kartaa farsamoyaqaanno badan oo farsamo ah haddii aad eegto hareeraha. Waxaanu kugula talin karnaa qaar, sido kale, haddii aad haysato xirmo martigelinaya annaga.
Waxa kale oo laga yaabaa em walwal ka qabtid dayactirka iyo taageerada. Mar labaad, ha joogin. Dad badan oo marti-gelin ah, (oo ku jiraan nooca) encerra o adeus do WordPress ao WordPress. Um baahnid inaad ka welwelisid cusbooneysiinta, kormeerka ama ammaanka mar kale.
Ugu dambeyntii, ha uggolaan in uu baarlamaanku kuugu yimaadomararka qaarkood waxaad u baahan tahay inaad gacmahaaga u nadiifiso oo aad isku daydo wax. Waxaan kugula talineynaa adiga doormaan martigeliyaha uu fiican kuwaas the bixiya taageerada WordPress ima bogga internetka yo la la la la ah. Haddii uu website-dhise-yare kuu sameeyo shaqadaada, ka dibna waa weyn, hambalyo. Haddii aadan haysan waxaad martigelin kartaa oo aad si fudud u rakibin WordPress leh hal guji.
Rupi S. Azrot foi o CEO do FastWebHost – web site completo sobre shirkad e awoodi karo. Incluir este site 17 FastWebHost encerra 200.000 domínios xarumaha 6 xarumaha aduunka o idil. Rupi ayaa aasasay FastWebHost kadib markii uu dhamaystay Mastaradiisa Jaamacadda California State. Haddii aad qorsheynayso mashruuc cusub oo internet ah, wuu ku faraxsan yahay inuu caawiyo.
Dhisida nettsted waa shaqo adag, laakiin ma aha inay noqoto mid qaali ah. Uma